Gudiga difaacayaasha Xuquuqda aadanaha oo Maamulka Puntland ka codsaday iney siidaayaan wariye Jaamac deperani – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
K24- Guddiga Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha ee Bariga Afrika (The Horn of Africa Human Rights Defenders Project) iyo Isbahaysiga Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha ee Somalia waxay maanta si wadajir u soo saareen War-qoraal o Maamulayaasha Dowlad-gobaleedka Puntland waajib uga dhigayo inay sida ugu dhaqsaha badan u sii daayaan Weriye Jamac Deperani.
Weriyahaasi oo u shaqeeya Telefishinka Somali Channel TV waxa bishan 19-dii u yeeray Boliska Maamulka Garowe, kadibna ay xireen, iyadoo aan loo sheegin wax sabab ah.
Waxaa lagu xiray Saldhigga Dhexe ee Garowe, waxaana bishan November 21-dii loo gudbiyey Xabsiga Dhexe ee Garowe, kadib, markii Maxkamadda Degmadda Garowe go’aansatay in Weriye Jamac Deperani la sii hayo 15 maalmood oo dheeri ah, si baaritaano dheer loogu sameeyo Kiiskiisa.
Jama Deperani waxa uu Soo-saare iyo Tebiye ka yahay Bandhiga Deperani (Deperani Show), oo inta badan lagu wareysto Siyaasiyiinta .
Bishan November 10-dii, Telefishinka Madaxa-bannaan ee Somali Channel oo Xaruntiisa Dhexe ku taallo magaalladda Londonwaxay Qoraal ka heleen Wasiirka Warfaafinta ee Puntland, kaasi oo ku amray in si KMG Weriyahaasi looga hakiyo Shaqadiisa Weriyenimo.
Afar maalin markii ay ka soo wareegtay Shaqo-joojintaasi, waxa uu Jama Deperani Wareysi la yeeshay Wasiirka Warfaafinta Puntland.
Markii uu helay Warqadda, waxa uu sii watay shaqadiisa, taasi ayaana aad loo rumeysan yahay sababta ka dambeysa xarigiisa.
Dhinaca kale, Agaasimaha Fulinta ee Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Bariga iyo Bartamaha Afrika (EHAHRDP), Dr. Hassan Shire ayaa sheegay in xarigga Jaamac Deperani farriin cad u tahay inay Maamulayaasha Puntland weerar ku hayaan Warbaahinta in laga hadlo waxyaabaha la xiisaynayo ama la mucaarado Dowladda.
“Waxaan cambaaraynaynaa xariga sharci-darradda ee Jamac Deperani, kaasi oo ka horimaanayo Dastuurkeenna iyo Xuquuqda Aadanaha ee Calaamiga” sidaa waxaa yiri Guddoomiyaha Isbahaysiga Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha ee Somalia, Abdullahi Abdi.
Waxa uu mar kale ugu baaqay Dowlad-gobaleedka Puntland in suda ugu dhaqsaha badan loo sii daayo Jama Deperani, lana xushmeeyo Xorriyadda Hadalka iyo Xuquuqda Aadanaha.
Dhagayso Taliyaha Ciidamada Xogga Somalia oo ka warbixiyay wixi uga qabsomay Kismaayo
Al-shabaab Oo Gaadhi Qaad Saarnaa Kasoo Afduubay Gudaha Kenya, ulana Tallaabay Dhinaca Somalia
admin 15th June 2015 27th August 2015
Mohamed Abdirashid Abaajo 7th March 2019
Daawo: Jawaari oo Kulan Albaabada u xiranyihiin la qaatay Shiikh Shariif iyo Faroole Maxaase ka soo baxay Kulankaasi???